हुम्लामा औलोका थप बिरामी भेटिए
सिमकोट, भदौ १७ गते । हुम्ला जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा औलोका थप बिरामी भेटिएका छन् । जिल्ला अस्पताल हुम्लाको चिकित्सकको टोलीले सर्केगार्ड, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा स्थानीयवासीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा औलोका थप बिरामी भेटिएका हुन् ।
यसअघि नै जिल्ला अस्पतालामा उपचार गर्न आएका बिरामीमा औलो भेटिएपछि जिल्ला अस्पतालले चिकित्सक टोली गाउँमा खटाएको हो ।ज्वरो आउँदा स्वास्थ्य चौकीमा गई त्यहाँ दिइएको सिटामोल खाँदा ठीक नभएको ताँजाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मासपुरकी बेल्सरी टमटालाई स्वास्थ्य टोलीले गाउँमा गएर उचार गरेको हो । ‘ज्वरो लामै समयसम्म आयो, तर आफूहरू सामान्य ज्वरो मात्र होला भनेर खासै वास्ता गरिएन,’ टमटाले बताउनुुभयो । जिल्लाबाट गएका चिकित्सकको टोलीसँंग परीक्षण गराउँदा औलो भएको थाहा पाएपछि आफू अचम्मित भएको उहाँले बताउनुुभयो ।
डा. सरोज प्रजापतिसहितको टोली गाउँमा गएर औलो परीक्षण गर्दै । तस्विर : राजन रावत
जिल्ला अस्पतालले ल्याव परीक्षण मेसिनसहित स्थानीयवासीको स्वास्थ्य परीक्षण गाउँमै गरेपछि औैलो भएको पत्ता लागेको डा. सरोज प्रजापतिले बताउनुभयो ।
यस्तो हिमाली क्षेत्रमा पनि औलो हुन्छ भन्ने कसैले अनुमान पनि नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । बेल्सरी टमटालाई मात्र होइन् उहाँका पति मङ्ग टमटालाई पनि औँलो लागेको भेटिएको छ । चिकित्सकका अनुसार दुवै जनाको उपचार भइरहेको छ ।
टमटा दम्पतीमात्र औलोका बिरामी होइनन् । केही दिन अघि सर्केगार्ड गाउँपालिका वडा नम्बर ३ रिपका नौ बर्षका बालक रोसस महतारालाई ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने बिमार लगातार १२ दिनसम्म भइरहँदा स्वास्थ्य चौकीबाट लिएको औषघि प्रयोग गर्दा पनि सन्चो नभएपछि बिरामीलाई जिल्ला अस्पतालमा लगिएको थियो । अस्पतालले परीक्षण गदा बालक महतारामा औलो भएको प्रमाणित भएको जिल्ला अस्पतालका डा. रन्जितकुमार यादवले बताउनुुभयो ।
परीक्षणका क्रममा सर्केगार्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ को रिप गाँउ र ताँजाकोट गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ र ५ मा बिरामी परीक्षण गर्दा थप पाँच जना औलोका बिरामी भेटिएको डा. यादवले बताउनुुभयो । अहिलेको यो प्रयास जिल्ला अस्पतालको आफ्नै पहलमा भएको र अब जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रका चारवटा गाउँपलिकामा व्यापक रूपमा औलोका बिरामीको परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुुभयो ।
हिमाली जिल्लामा औलो पहिलो पटक देखिएपछि दक्षिणी क्षेत्रमा औलोको अबस्थाका बारेमा जाँच गर्न जिल्ला अस्पतालको टोली जाँदा भेटिएका बिरामीलाई स्थलगत रूपमै उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुुभयो ।
सामान्यतया औलो एक हजार पाँच सय मिटर उचाईसम्म लाग्ने भए पनि कहिले काही भने तीन हजार मिटर उचाईको स्थानसम्म पनि हुनसक्ने डाक्टर यादवले बताउनुुभयो ।
उच्च हिमाली जिल्लाहरुमा नहुने औलो रोग पछिल्लो समय मौसम परिवर्तनको कारण तापक्रम बढ्दै जाँदा लामखुट्टे देखिन थालेपछि औलोका बिरामीहरू देखिएको हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । औलो देखिएका बिरामीको रगत थप परीक्षण तथा अध्ययनका लागि काठमाडौँ लगिने औलो रोग नियन्त्रण महाशाखाका चिकित्सक डा. मदन कोइरालाले बताउनुुभयो ।